ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက်:အကူအညီစားပွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
On behalf of the Growth team, Trizek (WMF) (talk) ၁၇:၄၁၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Previously, pages are approved within 2-3 days after uploading. Considering that now, the approval-waiting time has taken longer, may I know what I should do to quicken the process?
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား_ဆွေးနွေးချက်:အကူအညီစားပွဲ&oldid=493536" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။